Dubbii fi Hojii Iimaana Diigan Archives - Page 4 of 6 - Ibsaa Jireenyaa
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 6.1
April 18, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbee keessatti tawhiida rubuubiyyah fi asmaa’a wa sifaat keessatti dubbii iimaana diigu ilaalle jirra. Har’a immoo Tawhiida Al-Uluuhiyyah keessatti dubbii iimaana diigu ilaalla.
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 5.3
April 17, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe irraa itti fufuun Maqaa ykn sifata Rabbii olta’aa mormuun akkamitti kufrii fi wantoota iimaanaa diigan keessaa itti ta’uu ni ilaalla. (Sifaata jechuun amala wanti tokko ittiin ibsamuudha. Fakkeenyaaf kana akka beekumsa, dhageetti, arguu, jireenya, dubbachuu, olta’u, dandeetti, araaramu, rahmata gochuu fi kkf sifaata.)
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 5.2
April 16, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti maqaalee fi sifaata Rabbii keessatti dubbii imaana diigu jalqabne jirra. Yaadachisuuf maqaalee fi sifaata keessatti dubbiin iimaana diigu: sifaata (amaloota) Rabbii amaloota uumamtootatiin wal fakkeessu, maqaalee fi sifaata Qur’aanaa fi hadiisa sahiih ta’an keessatti mirkanaa’an fudhachuu diduu fi mormuudha. Har’a kuni akkamitti akka kufrii ta’uu ni ilaalla.
Dubbisa Itti Fufuuf
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 5.1
April 14, 2020 Sammubani Leave a comment
Tawhiida maqaalee fi sifaataa keessatti dubbii iimaana diigan
Jalqaba irratti, waa’ee maqaalee fi sifaataa ilaalchisee wanta ahli sunnah wal jama’aa amanan kaasu barbaanna. Wanti isaan amanan: osoo hin jijjiriin, hin dhabamsiisin, osoo akkana akkana hin jedhinii fi wayitti hin fakkeessin, wanta Rabbiin ittiin of ibseetti fi wanta Ergamaan Isaa sallallahu aleyh wassallam ittiin Isa ibseetti amanuudha.
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 4.2
April 11, 2020 Sammubani Leave a comment
Akkaataa Rabbii olta’aa Arrabsuun Dubbii Kufrii iimaana diigu itti ta’u
Rabbii olta’aa guddaa arrabsuun gosoota dubbiiwwan nama kafarsiisanii fi iimaana diigan keessaa hundarra fokkuu akka ta’etti lakkaawama. Kunis karaa baay’een ilaallamu danda’a. Kutaa darbe keessatti karaalee muraasa ilaalle turre. Har’as itti fufuun karaalee hafan ni ilaalla:
April 9, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbee keessatti dubbii iimaana diigu ilaalu jalqabne jirra. Har’as itti fufuun dubbii kufrii iimaana diigu ni ilaalla: